Yugyan Daily » प्रधानमन्त्रीको राजिनामाः नेपालीले जित्ने की दिल्लीले ?
अव तपाई दिल्लीलाई जिताउनु हुन्छ वा नेपाललाई ?बल तपाइहरुकै कोर्टमा छ
प्रधानमन्त्रीको राजिनामाः नेपालीले जित्ने की दिल्लीले ?
नेपालले १४६ बर्ष अगाडीदेखि उपभोग गरेको तर ५८ बर्ष अगाडी गुमाएको भुभाग फिर्ता मागेको छ,देश जित्ने वा हार्ने बिषयमा पनि बहुमत र अल्पमतको खेल लागु हुन्छ र ?
- डा. कल्याण रोका
संञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरु सत्य हुन भने आजको स्थायी कमिटीको बैठकमा पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको राजिनामाको माग गर्नुभएछ । प्रधानमन्त्रीबाट मात्र होइन, केपी शर्मा ओलीले पार्टीको अध्यक्षबाट पनि राजिनामा दिनु पर्ने रे । सचिवालयमा रहेका अन्य केही जिम्मेवार कमरेडहरुले पनि उहाँकै स्वरमा लय मिलाउनु भएछ । राजिनामाको कारण अरु केही होइन रहेछ । ५८ बर्षदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको आफनो भुमि फिर्ता ल्याउन नेपालले कानुनी, कुटनीतिक, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्रीले अगाडी वढाउनु भएको पहलकदमी रहेछ ।
नेपालले नक्शा प्रकाशन गरेर संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा त्यसलाई पास गरेपछि मौन बसेको भारतले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने चलखेल गर्नु अस्वाभाविक होइन । भारतको नेपाली भुमीमा एकाधिकार बजारको विस्तारदेखि हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरुमाथिको अप्रत्यक्ष नियन्त्रण जस्ता केही स्वार्थहरु छन । विगतदेखि नै ती स्वार्थहरु पुरा गर्न भारत नेपालमा आफु अनुकुलको सरकार चाहन्थ्यो । विगतका हाम्रा शाषकहरुको अभ्यास र व्यवहार हेर्दापनि भारतलाई नरिझाई अर्थात आज्ञापालक नभई सरकार टिकाउन सकिदैन भन्ने बलियो फोविया थियो ।
तर भारतीय यो फोविया र भक्तिगानलाई तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले ब्रेकथ्रू गर्नुभयो । नेपाली कागेसका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भारतले नेपालमा आर्थिक नाकावन्दी लगायो । त्यसको कारण भनेको तत्कालिन सरकार र नेकपा एमालेले संविधान निर्माणका समयमा भारतीय चाहना र स्वार्थको अस्वीकार थियो । नाकावन्दीको अस्त्र प्रयोग गरेर नेपाललाई गलाउने भारतीय प्रयास त्यतिवेला असफल भयो, जतिवेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७२ साल अशोज २५ गते नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । नाकावन्दीको डटेर सामना गर्नुभयो । चीनसँग व्यापार तथा पारवाहन सन्धी गर्नु भयो । भुमीबाट बेष्ठित देश नेपाललाई तेस्रो देशसम्म चीनिया भुमी र समुन्द्रमा नेपालले व्यापार गर्न पाउने अधिकार स्थापीत गरि भुपरिवेष्ठित देशले पाउने अधिकार दिलाउनु भयो । नेपाललाई भुजडित देशकोरुपमा स्थापीत गर्नुभयो । तर त्यतिवेला पनि सरकारमा सहयात्रा गरेका आफनै मित्रले उहाँलाई घात गर्नु भएको थियो । त्यसको पछाडी भारतको उक्सावट थियो की थिएन रु त्यो त कमरेड प्रचण्डलाई नै थाहा होला रु भारतसँगको नाकावन्दीको सक्रिय र प्रभावकारी सामना गर्दे भारतलाई नै माफी माग्न बाध्य बनाउने, भारतीय एकाधिकारवादबाट नेपाललाई मुक्त गर्न चीनसँग रेल्वे, सडक, ट्रान्समिसनलाईन, पेट्रोलियम पाइपलाईन, भण्डारण र अन्वेषण लगायत अन्य मुलुकको दीर्घकालिन महत्वका विषयमा सम्झौता गर्नु भएका केपी शर्मा ओलीलाई कसरी थाहा होला र? इतिहास साक्षी छ , त्यतिवेला राजिनामाको कारण केही थिएन, प्रधानमन्त्रीले चीनसँग गरिएका सम्झौताहरु थिए । त्यसको पछाडी भारतीय उक्साटमा थियो । त्यो वेला केपी शर्मा ओलीले हाँसी हाँसी व्यवस्थापीका संसदमा राजीनामाको घोषणा गर्नु भएको थियो । त्यतिवेला देश हारेको थियो र भारतले जितेको थियो । त्यसपछि केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा चीनसँगका सन्धी सम्झौताहरु दराजमा थन्क्याइएका थिए ।
आज हाम्रो देश इतिहासको त्यही मोडमा आईपुगेको छ । नेपालले १४६ बर्ष अगाडीदेखि उपभोग गरेको तर ५८ बर्ष अगाडी गुमाएको भुभाग फिर्ता मागेको छ । चीन, अफगानस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश सवै छीमेकीहरुबाट सीमा विवादमा अल्झिएको भारतले नेपालले अगाडी सारेको स्वाधिनता, माटो र देशभक्तिको कदमलाई किन सहन सक्थ्यो र रु आखिर उसले अहिले पनि सरकार परिवर्तनको नाटक मञ्चन गरेको छ । त्यो अस्थिर नाटकको पात्रकोरुपमा हाम्रा केही कमरेडहरु कन्दनी फुकालेर नेपथ्यमा नाँची रहनु भएको छ ।
२०७३ श्रावण १९ गते पहिलो कार्यकालबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दिएको दिन देश हारेको थियो, तर अव देशले अव हार्नु हुदैन । पहिलो कार्यकालमा केपी शर्मा ओलीलाई राजिनामा दिन बाध्य पारेर हारेको देशलाई जिताउन नेपाली जनताले गत निर्वाचनमा नेकपालाई लगभग दुई तिहाइ नजिकको बहुमत दिएका छन । देशले निरन्तर जितिरहेको यो समयमा भारतसँग निहुँ खोजेर नेपालको प्रतिष्ठा कायम गर्न सकिदैन, अन्तराष्ट्रिय सन्तुलन खल्वल्याउन पाईदैन भनेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने काम कति देशभक्तिसँग गाँसिएको होला रु यो कति जनताको अभिमत र चाहना अनुसारको बोली होला रु यो माग कति माक्र्सवादसँगत होला ? देश जित्ने वा हार्ने बिषयमा पनि बहुमत र अल्पमतको खेल लागु हुन्छ र ?
यतिवेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको बिषय बेमोषमी खेती र भारतीय उक्सावट भन्दा अरु केही होइन । भारत त गुमेको नेपाली भुभाग समेटेर नक्शा जारी नै नहोस भन्ने चाहन्थ्यो । मधेशलाई आधार बनाएर राजनीति गर्ने दलहरुको समर्थनमा नेकपा फुटाएर आजभन्दा केही महिना अगाडी नै आफु अनुकुलको सरकार बनाउन चाहन्थ्यो । तर सरकारले दलसम्वन्धी अध्यादेश ल्याएर यो कदम रोकिएको थियो र यस्तो उक्सावटमा नलाग्ने शर्तमा त्यो अध्यादेश फिर्ता गरिएको थियो । तर फिर्ता गर्न सक्ने सरकारले फेरी अध्यादेश ल्याउन पनि सक्छ । यतीवेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको बिषय पोरख गर्न नसक्नेहरुको इष्र्या र कुण्ठा बाहेक केही होइन । अव यो बिषय नेकपाको सचिवालय वा स्थायी समितिको मात्र बिषय होइन, यो त काठमाण्डौ र दिल्लीवीचको लडाई हो । स्वाभिमानी देशभक्त नेपाली र कुर्सीकालागि देशलाई हराउन खोज्ने मानिसहरुवीचको लडाई हो । कमरेडहरु, अव तपाई दिल्लीलाई जिताउनु हुन्छ वा नेपाललाई ?बल तपाइहरुकै कोर्टमा छ ।